Mmemme Channel Channel Polemics na Congress nke Smart Cities na Obodo | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraChannel Istanbul Polemics na Smart Cities na Municipalities Congress
obodo mara mma na kansụl ime obodo
IMM onyeisi oche Ekrem İmamoğlu, Turkey Union of Municipalities ẹkenịmde ke Ankara na òkù "Smart Ọnọdụ na Municipalities Congress" jikọtara ejikọta.
A ga-enye akwụkwọ ịkpọ oku a, MMM maka onyinye maka ọrụ ya na itinye aka, Imamoglu ga-enweta onyinye ahụ n'aka Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan. Agbanyeghị, nzukọ ọgbakọ ahụ emeghị ihe omume a kwuru na akwụkwọ ịkpọ oku ahụ. Imamoglu na ndị isi ụlọ ọrụ CHP mepere emepe kpebiri na ha agaghị aga ọgbakọ a. Imamoglu kwuru na ọ gaghị eso na ndị otu ahụ, wee zaa ajụjụ site n'aka ndị nta akụkọ.
Tupu nzukọ ọgbakọ a, o nyefere Onye Isi Ala Recep Tayyip Erdoğan akwụkwọ ozi dị peeji 4 yana arịrịọ maka nhọpụta Ọ dị oru ndị obodo anyị kwadebere na teknụzụ ozi. Eleghị anya ọ bụ ndị kọmitii ahọpụtara nyochara ndị a. Anyị nwekwara ọmụmụ ihe ngwanrọ pụrụ iche gbasara ụlọ ọrụ na-egosi akara. Anara onyinye ahụ. Obodo ọ bụla nwere ọrụ bara uru. Ma aghụghọ nke anyị kpọrọ anyị bụ: 'Anyị chọrọ nke ukwuu isonye. Must ga-abara anyị uru. Maka na Onye isi ala anyị ga-enye gị onyinye ahụ ma gosi ya. Anyị chọrọ ka ị sonye na usoro isiokwu ebe anyị ga - eche n'echiche gị kachasị na informatics, teknụzụ dị elu na obodo smart. ' Anyị niile agbaala mbọm ma nwee obi ọma iso anyị ebe a. Mana a jiri usoro mmụta sayensị uche dị iche iche wee jikwa usoro ahụ. Ọzọkwa, ndị na-ekwu ya bụ ezigbo ndị ọbịa nke TBB. ”
Ekrem İmamoğlu, Onye isi ala nke Obodo isi obodo Istanbul (IMM), sonyere na “Smart Cities and Municipalities Congress nke e mere na Ankara. Tupu ihe omume a mere na Congresium Zeugma Hall nke Ankara Chamber of Commerce (ATO), ndị otu IMM guzobere n'otu ebe ahụ gara ebe ahụ. Mayorzmir Mayor Tunç Soyer gara İmamoğlu na IMM guzo. Citizensmụ amaala, ya na onye isi ya gosipụtara mmasị dị ukwuu na foto ndị ahụ. Citizensfọdụ ụmụ amaala, ndị ikwu, Imamoglu zutere na ekwentị dịka vidiyo. Erdoğan kewara akara mmeghe ahụ. Imamoglu, onye butere Erdoğan envelopu, onye bịara n'akụkụ ya n'oge mkpọchi ahụ, kwara onye na-ama ya aka Binali Yıldırım aka na ntuli aka nke Istanbul. Erdoğan kwuru okwu mmeghe nke ọgbakọ ahụ. Imamoğlu, mgbe emepechara ọgbakọ ahụ, Ankara Metropolitan Municipal Mayor Mayor Mansur Yavaş, İzmir Metropolitan Obodo Mayor Tunç Soyer, Adana Metropolitan Mayor Zeydan Karalar, Eskişehir Metropolitan Obodo Mayor Yılmaz Büyükerşen, Antalya Metropolitan Municipal Mayor Mayor Muhittin Bọọlụ Mighaigha Mọn Mọnig .
“ABỌCH DA BILYR” ”BỌCH ””
Ajụjụ mbụ a jụrụ Imamoglu bụ, aslında N’ezie, Minista na Onye isi ahụ enyeghị aha ya ozugbo, mana Kanal Istanbul bụ ebum n’uche ha. Kedu ka ị ga-esi nyochaa mkparịta ụka ndị dị n'ime ”. Imamoglu zara ajụjụ a:
Sanırım Echere m na ị maara nzukọ anyị na-enwe taa. Union of Municipalities nke Turkey (TBB) kwadebere ma karịsịa ịdị mkpa oru tinye n'ihu site municipalities na elu technology na adade ihe ngosi. Okwu a bụ okwu Onye isi ala anyị ga-ekele anyị. Onye isi ala TBB Mazị Fatma Hanım, onye isi obodo nke Gaziantep kpọrọ mkpirisi nzuzo wee sị na a ga-enye ndị isi ndị ọzọ dịka m, na Onye isi ala anyị ga-enye ha onyinye ndị a. Anyị lekọtara isonye ebe a. Reason; Maka ndị na-amaghị, TBB bụ nke anyị. Nke ahụ bụ otu nzukọ jisiri site ịcha ego si Amawaputala nke niile municipalities na Turkey. Dịka o si dị, buddies ndị a na-arụ ọrụ na mmefu ego nke obodo ndị mejupụtara ebe mbụ dịka TBB, ọkachasị Istanbul, Ankara, Izmir, Adana na Mersin. Mana taa, ọ bụ ihe nwute, bụrịị ụbọchị. Ndi obodo niile no ebe a. Dị ka anyị na-egosipụta ozi nke Turkey, kenyere ozi nwere ime ọrụ ha. Iji maa atụ, ikwu okwu dị elu. Echere m na a ga-ewepụta Mịnịsta nke teknụzụ nke teknụzụ teknụzụ dị elu, ga-akọwa ihe mere ha ji nwee njeri dollar 107 na afọ ise gara aga, gịnị kpatara ọdịiche dị na mbupụ na mbubata ya bụ ijeri dọla 107, anyị ga-ekwu na ọ dị anyị mkpa imekwu azụmahịa ọnụ. ga-ekwu. Ọ gwaghị nke ahụ. Onye Minista Nkà na ụzụ na-ekwu banyere ụzọ mmiri ọ bụla ọ ga-eme. Nke a, onye Minista Urbanism kwukwara .. Ihe a niile dị njọ ma anyị anaghị esonye n'ụzọ. Dịka m kwuru, ọ bụ ụbọchị na-enweghị obi ebere. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịtụle maka ọwa. Anyị chọrọ. Ọzọkwa, ajụrụ m ha ugboro ugboro, 'ka anyị bịa, ka anyị mee ihe ngosi, Maazị Onyeisi'. Nye m, oge kachasị taa bụ inye ha akwụkwọ ozi anọ dị na peeji nke emezigharịrị arịrịọ m. Ruo m nwere ike ịhụ, okwu onye ozi ahụ tụgharịrị uche na leta m ka ọ na-aga n'ihu, na-agụ ya. Ndị enyi m dọọla aka na ntị. ”
Orum Achọrọ M ikike ikike "
“Ọdịnaya bụ; N’ụbọchị ndị na-adịbeghị anya, karịchaa mgbalị ndị ozi na-eji nyocha ụgha iji megharia usoro a, otu ụbọchị ha kwuru n’echi ya, ‘Imamoglu kwụsịrị ụzọ ụgbọ oloko ahụ. Enweghị atụmatụ ịkpa nkata. Anyị enweghị nsogbu mmiri. Melen Dam abụghị nsogbu 'na-ekwu, Maazị Onye isi ala, ha nyere ozi na-ezighi ezi, achọrọ m inye m nkowa m kwupụtara. Echere m: Abụ m onyeisi obodo nke nde mmadụ iri na isii. Maazị Onye isi ala, onye obodo anyị na ezinụlọ ya nọ. Abụ m onye isi obodo nke obodo a kacha baa uru, nnukwu obodo. Anam achọọ ikike a, achọrọ m ya, achọrọ m ya. Enyere m nke a n’aka Onye isi ala. Atụrụ m anya na akọnuche a na ezi ikpe ziri ezi. Enwere m olileanya na ọ ga-eme n'oge adịghị anya. Nsogbu ozo di. Cheta na 16 ndị ọduọ obodo 30 mepere emepe nwere nzukọ dị ka ọnwa anọ gara aga, n’ụbọchị mbụ nke Septemba. Emere anyi nkwa na nzuko a. N'ikwekọ na atụmatụ anyị, Maazị Onye isi ala kwuru, sị: 'Iwu banyere obodo iji kwurịta ma kwuo banyere ihe a ga-ehiwe kọmitii.' O debara aha ya n’onwe ya. Onye isi obodo Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavaş na Eskişehir Mayor nwanne anyị Yılmaz Büyükerşen na ndị otu AK Party gụpụtara aha m ma họpụta minista 4. Mgbe ahụ, ọ nyefere Onye isi ala Fuat Bey. Onye obula gha aghata. Gini mere anyi ji eche banyere itinye aka? Nke a bụ ihe ihere ọzọ taa. Ọ dị m nwute, ịnụ m hijab. Taa, ọ dị mwute na, ọ dị njọ. TBB akwadebewokwa ụbọchị ihe na-agaghị agbanwe agbanwe. Ana m akpọsa nke a Fatma Hanım. Anyị ji obi ọma mata ya. Ka m kọwaa nke ahụ. Amaghị m onye mejọrọ, mana ọ na-aza anyị ajụjụ. Mpaghara 6-6 na-enye akụkụ buru ibu nke mmefu ego. Ego anyị na-eme n’obodo dị ebe ahụ. E nwere ụfọdụ ndị na-ebufe gaa n’obodo ndị chọrọ. Kedu nke a ga-eme. Ma ọ dịghị onye n'ime anyị nwere obi ụtọ n'ihe anyị nwere taa. Anyị enweela ahụmịhe dị njọ - m na-ekwuchitere obodo niile - ka anyị bụrụ ndị isi obodo siri ike. "
VAR Enwere m ọtụtụ ọrụ na-echere m na Istanbul ”
Imamoglu, ajụjụ maka ma ha aga-aga nzukọ a, "Maka anyị, nzukọ anyị agwụla. Enweghị mkpa. Chee echiche banyere ya, aga m agwa gị ihe. Ọ bụrụ na burukwa nke bụ isi n'ụtụtụ, mụ na ha ga-ese okwu. Anyị enweghị ụdị ahụ. Enwere m ọtụtụ ọrụ na-echere m na Istanbul. O nwere ọtụtụ ọrụ na-eche ndị enyi m n'obodo ha. Onye isi obodo nke Ankara Metropolitan Mayor, site n'ọnụ ụzọ a, ga-edozi ọrụ 100. Anyị burukwa ọrụ. Ebe a na-eme ka anyị bụrụ ihe efu taa. Anyị achọghị ya .. Ajụjụ ọzọ jụrụ Imamoglu bụ, “I kwuru na m zitere akwụkwọ ozi banyere Istanbul. Echeghị m na ọ nwere naanị Kanal Istanbul na akwụkwọ ozi ahụ. Enwere okwu nke itinye ya na atụmatụ itinye ego maka usoro ahịrị metro. Enwere nkọwa banyere ndị a ”. Imamoglu ajuju a, “okwu ezighi ezi. Agụnyere na atụmatụ itinye ego. Mgbe atụmatụ itinye ego na-aga na enweta ego. A ga-arịọ nkwado. Nke ahụ bụ ihe anyị chọrọ ugbu a. Ebe ọ bụ na etinyeghị ya na atụmatụ itinye ego, enweghị atụmatụ nkwụnye ego. Enwere Ntụziaka adịghị mma. Enweghị isi ịchọ ihe ọ bụla ebe ahụ. Anyị na-echere. Ọ bụrụ na ha kpọrọ m, nke m chọrọ nke ukwuu, Maazị Onye isi ala nwere ụmụ amaala ọ bụla na nde mmadụ iri asaa na asatọ, o ji m ụgwọ ugboro iri na isii. Maka na a na m arịọ nde mmadụ 82 ka ha kara ọkwa. Achọrọ m ezi ọkpụkpọ òkù a na ezi obi m niile, akọ na uche m. Egosiri m mmetụta ndị a niile. N'agbanyeghị ihe niile, m na-atụ anya nzaghachi dị mma ”.
AJ OFJ C CEMEVS
Imamoglu kwuru, "E nwere mkpebi banyere Cemevleri sitere na Council Obodo Izmir. Ọ bụrụ na emehieghị m, ọ bụ ọrụ gị. Said kwuru na anyị nwere ọtụtụ ihe ime. Olee mgbe i bu n’obi iwebata ọrụ a n’uche? Eleghi anya ị furu ya. E welitere ya na Mọnde ma zigara ya ndị ọrụ. Dika mkpebi nke kompeni a, echem na anyi nwere nzuko echi, abali Thursday. Enwere m olileanya na a na-eme mkpebi a maka ofufe nke ụmụ amaala Alevi nke obodo a n'otu na akọ na uche mmadụ niile. Anyị enweghị ike ikpebi onye kwesịrị iji ya fee ofufe. Nke a dị mkpa maka akọ na uche ọtụtụ nde ụmụ amaala Alevi. Ọ dị na ọrụ ugbu a. Achọrọ m ndị otu anyị niile nọ na IMM ka ha jiri akọ na uche ha niile, omume na nkwenye nke ikpe ziri ezi kpebie iwu a. Enwere m olileanya na a ga-enweta ezigbo azịza n'izu a ”.
“ANY AT ANYT ANYA ANA E KWURU ANA N’ AKW INKWỌ NZỌ ”
İmamoğlu kwuru, "I kwuru na aga-enye onyinye. Gini bu onyinye a ?:
Var Enwere oru ngo nke obodo anyị kwadebere banyere teknụzụ ozi. Eleghị anya ọ bụ ndị kọmitii ahọpụtara nyochara ndị a. Anyị nwekwara ọmụmụ ihe ngwanrọ pụrụ iche gbasara ụlọ ọrụ na-egosi akara. Anara onyinye ahụ. Obodo ọ bụla nwere ọrụ bara uru. Ma aghụghọ nke anyị kpọrọ anyị bụ: 'Anyị chọrọ nke ukwuu isonye. Must ga-abara anyị uru. Maka na Onye isi ala anyị ga-enye gị onyinye ahụ ma gosi ya. Anyị chọrọ ka ị sonye na usoro isiokwu ebe anyị ga - eche n'echiche gị kachasị na informatics, teknụzụ dị elu na obodo smart. ' Anyị niile agbaala mbọm ma nwee obi ọma iso anyị ebe a. Mana a jiri usoro mmụta sayensị uche dị iche iche wee jikwa usoro ahụ. Ọzọ, ndị na-ekwu ya bụ ezigbo ndị ọbịa nke UMT. ”
Amalite Istanbul 2019 World Smart Cities Congress
Amalite ụwa 2018 World Smart Cities
Emere obodo ukwu nke ụwa dị na Istanbul'19
Gọvanọ Şahin na-akwado 2017 World Smart Cities Fair
International Smart C Conference Conference Anọrọ na Ankara
International Smart Cities Conference na Konya
Egosiputara National Smart C Strategy na Action Plan
Aha Polemics na Göksun Tunnels
Obodo C Smart na Obodo
Union of Municipalities nke Turkey